Aston Villa Wolverhampton oo garoonkeeda Villa Park guuldarro xanuun badan ku baday kooxda Arsenal… +SAWIRRO – Gool FM
Aston Villa Wolverhampton oo garoonkeeda Villa Park guuldarro xanuun badan ku baday kooxda Arsenal… +SAWIRRO
Dajiye February 6, 2021
(London) 06 Feb 2021. Kooxda Aston Villa ayaa garoonkeeda Villa Park guuldarro xanuun badan ku baday naadiga Arsenal, kaddib markii ay kaga adkaatay 1-0, ciyaar qeyb ka aheyd kulamada toddobaadkan ee horyaalka Premier League.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 1-0 ay ku hoggaamineysay kooxda martida loo ahaa ee Aston Villa.
Daqiiqadii 2-aad ee bilawgii ciyaarta kooxda Aston Villa ayaa hoggaanka u qabatay dheesha, kaddib markii uu 1-0 ka dhigay xiddigooda Ollie Watkins, waxaana goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Bertrand Traore.
Balse Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku dhamaatay 1-0 oo ay Aston Villa kaga adkaatay kooxda Arsenal oo ku soo booqatay garoonka Villa Park, Gunners ayaa ku jirta booska 10-aad ee kala sareynta horyaalka Premier League, halka Aston Villa ay ku jirto booska 8-aad.
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Huesca iyo Real Madrid ee horyaalka La Liga oo la shaaciyey
Ronald Koeman oo si RASMI ah u shaaciyey liiska xiddigaha kooxdiisa Barcelona uga qeyb galaya kulanka Real Betis